Hena madio - hena voajanahary | safidy
Androany dia feno amin'ny tazo fijinjana isika izao. Nony maraina ny andro dia nandeha tany amin'ny lemaka iva izahay ...
Amin'ny ho avy, ny hena madio na ny hena voankazo afaka mamaha olana maro - raha eken'ny mpanjifa. Ny tontolo iainana, ny biby ary ny fahasalaman'olombelona dia hanao soa azy.
ny Sonja Bettel 20. 2019 martsa, 16: 14 9.6k Views
"Azo heverina fa ny hena madio dia mety ho salama kokoa noho ny hena voajanahary."
Tamin'ny volana Aogositra 2013 tany Londres teo anoloan'ny fakan-tsary sy teo imason'ny mpanao gazety 200, ny burger lafo vidy indrindra dia natsiro sy natsiro. 250.000 kilao, voalaza fa tamin'io fotoana io, ny vidin'ny mofo hena natono tsara. Tsy noho ny biby fiompy Kobe izay voatosika ho faty, fa noho ny vondrona siansa holandey izay niasa nandritra ny taona maro tamin'ny fiompiana an'io omby io tao amin'ilay lab. Te hanova ny famokarana hena amin'ny ho avy izy ireo ary hamonjy ny fiainana eto an-tany. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ny hamburger vita amin'ny henan'omby dia mety mitentina folo euros na latsaka kely fotsiny ny tsiroaroa sy ny tsiro toy ny mahazatra antsika.
hena madio: ny hena voajanahary amin'ny lovia Petri
Ny hevitra momba ny fanangonana hena ao anaty lovia Petri dia efa nataon'ilay manampahefana anglisy anglisy Winston Churchill. Tamin'ny volana Desambra 1931 dia naminaviny tao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny "Magazine Strand" momba ny ho avy izy: Tsy mampino ny manangana akoho iray manontolo isika, raha te hihinana ny tratrany na ny tongony fotsiny isika, ao anatin'ny 50 taona dia mety hamahanay azy ireo ,
Tamin'ny fanombohan'ny 2000, mpandraharaha efa nisotro ronono Willem van Ellen dia nanentana ireo mpikaroka avy amin'ny Oniversite ao Amsterdam, Eindhoven ary Utrecht ary orinasa mpikarakara hena holandey mba hirotsaka amin'ny fampandrosoana ny hena vitro. Ny tetikasa InVitroMeat dia nahazo ny famatsiam-bola avy amin'ny fanjakana hatramin'ny 2004 ka 2009. Mark Post, manam-pahaizana momba ny varotra ao amin'ny University of Maastricht, dia tena talanjona tamin'ny hevitra fa nitazona azy izy. Ny tsirony voalohany tamin'ny nahaterahan'ny laboratoara tamin'ny volana Aogositra 2013 dia natrehan'ny mpanao gazety amerikana, Josh Schonwald sy ny mpikaroka momba ny sakafo ara-tsakafo Australiana, Hanni Rützler, mpikaroka momba ny sakafo.
Ny mpiompy dia efa tena akaiky ny tsiron'ny hena nohanina, nanaiky izy ireo, saingy somary maina ihany. Tsy ampy ny tavy, izany no manome otrikaina sy tsirony. Raha jerena ianao dia tsy mahita tsy fitoviana amin'ny Faschiertem mahazatra, na dia ny fanaovana ny hena aza mitondra tena toy ny fanaonao taloha. Niparitaka avy tamin'ny sela tsirairay ny hozatra bovine nandritra ny herinandro maromaro momba ny vahaolana mahavelona ao anaty siny hoditra.
Ho an'ny tontolo sy ny feon'ny fieritreretana
Fa nahoana ny ezaka manontolo? Amin'ny lafiny iray, noho ny antony hiarovana ny tontolo iainana sy ny toetrandro. Mba hamokarana henan'omby iray kilao dia mila rano 15.000 litatra ianao. Araka ny tombantomban'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana, ny 70 isan-jaton'ny tany fambolena dia ampiasaina amin'ny famokarana hena, izay mametraka ny 15 ka 20 isan-jaton'ny gazy goavambe. Tamin'ny taona 2050, ny famokarana hena dia mety hitombo eran'izao tontolo izao amin'ny 70 isan-jato, satria amin'ny fanambinana sy ny fitomboan'ny mponina manerantany dia mitombo ihany koa ny hanoanana amin'ny hena.
Ho an'i Kurt Schmidinger, mpikatroka ao amin'ny Fikambanana miady amin'ny orinasa biby ary filohan'andraikitra voalohanySakafo ho avy - hena tsy manam-bady biby"Ny lafiny etika dia manan-danja mitovy:" Manerana izao tontolo izao, mihoatra ny 65 biby an-tapitrisany no maty isan-taona mba hahazoana sakafo. Mba hamokarana hena kaloria iray dia fihinana biby kaloria fito ary tsy maintsy manaitra ny karazan'ny biby ary ny fako. ”Ny sakafo fambolena voarindra izay ataon'i Kurt Schmidinger dia manome sakafo betsaka kokoa noho ny fikarakarana ny biby. Na izany aza, Kurt Schmidinger, izay nandinika ny geofizika ary niasa tao amin'ny indostrian'ny IT, dia tena realista: "Tamin'ny taona 90, noheveriko fa tsara ny mahavita mamoa hena ho an'ny olona tsy te handeha raha tsy izany. "Imbetsaka izy no nitady fotoana toy izany saingy tsy mbola teo amin'ny 2008 izay nitranga tany amin'ny kongresy hena vitro voalohany tany Norvezy.
Schmidinger dia nanangona vaovao ary nanoratra tesis dokotera tao amin'ny Departemantan'ny Siansa momba ny Sakafo ao amin'ny University of Natural Resources sy Science Science. Ao amin'ny tranokala futurefood.org dia mamoaka fisafidianana hena amin'ny fihinanana hena izy, anisan'izany ny "hena namboarina" na "hena madio", satria ny hena vitro dia antsoina ankehitriny noho ny antony fanjifana tsaratsara kokoa.
Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia misalasala momba ny hena amin'ny fantsom-panadinana na mandà azy tanteraka. Na izany aza, mety hiova izany rehefa lasa tsapa ny fampidirana ny tsena ary fantatra kokoa momba ny fomba famokarana, ny tombontsoa ary ny tsiron'ny hena namboarina.
hena madio - tsara kokoa sy mora kokoa
Tany am-piandohan'ny 2010, ny mpahay siansa holandey dia nahomby voalohany tamin'ny fitomboan'ny sela hozatra lehibe kokoa avy amin'ny sela ho an'ny omby. Ny olana dia ny selan'ny hozatra ao amin'ny zavamananaina mazàna dia mila fanatanjahan-tena mba hitombo tsara. Ny fialantsasatry ny sela amin'ny alàlan'ny fiakarana sy ny fihetsiky ny fonosan'ny laboratoara, na izany aza, dia manome angovo betsaka. Mandritra izany fotoana izany, ny mpikaroka dia afaka mamoaka ny hena myoblasts (Ny sela mpialoha lalana) ary mampitombo matavy ihany koa amin'ny fandaniana angovo, ary azon'izy ireo soloina ny serum amin'ny zanak'omby mbola tsy teraka, izay nampiasaina tamin'ny alàlan'ny fitsaboana hafa.
Azo heverina fa ny "hena madio" ihany koa dia mahasalama kokoa noho ny hena voajanahary. Araka izany, azo ampiharina fa mihena na mitombo ny asan'ny tavy amin'ny asidra matavy Omega 3 mahasalama. Ankoatr'izany, ny pathogens ao amin'ny hena dia mety ho voasakan'ny ankamaroany na dia tsy mampiasa antibiotika aza.
Fa afaka taona vitsivitsy kokoa ny famokarana amin'ny sehatra indostrialy. Na izany aza, ny mpikaroka holandey dia tsy miasa irery amin'ity sehatra ity. Any Etazonia sy Israely, ny fomba fanombohana dia miasa amin'ny fomba fambolena hena sy trondro dia i Bill Gates, Sergey Brin ary i Richard Branson, orinasa orinasa mpanazotozy. Cargill ary ny Alemanina PHW Group (anisan'izany ny alikaola Wiesenhof) nanome vola an'arivony sy Euros an-tapitrisany amin'izany. Ny iray àry afaka mihevitra fa ny fambolena hena dia mety hiteraka be.
Na asiana fanatsarana hena na hanaratsy ny fahamarinana ara-pizarana manerantany ny fambolena hena. Na izany na tsy izany, ny famokarana mitongilana dia tsy azo hoheverina ho an'ny mpikaroka holandey Mark Post: ny vondrom-piarahamonina dia hitandrina sy hikarakara biby vitsivitsy, ary ireo sela misy raikitra dia alaina tsindraindray, ary avy eo dia ampiasainy hamokarana hena ao anaty zavamaniry. Mba hahafahana mameno ny fepetra ara-pivavahan'ny jiosy na silamo, dia azo vonoina ihany koa ny biby, saingy azo ampiasaina io mba hamolavola hena marobe na halal.
Inona moa i Vleisch?
INDRINDRA REHETRA REHETRA
Photo / Video: PA Wire.
Nosoratan'i Sonja Bettel
Previous article Misy zavatra tsy mety amin'ny sakafo rehetra
Lahatsoratra manaraka Ny nofin'ny ho avy
Misy zavatra tsy mety amin'ny sakafo rehetra